Fanadinam-panjakana Bepc :: Manana vahaolana amin’ny taranja EPS ireo mpampianatra • AoRaha
Fanadinam-panjakana Bepc Manana vahaolana amin’ny taranja EPS ireo mpampianatra
Notapahan’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena ny hamadihana ireo taranja ara-panatanjahantena iombonana ho an-tsoratra amin’ny fanadinana Bepc amin’ity taom-pianarana ity. Hanahirana an’ireo mpampianatra ny taranja ara-panatanjahantena na EPS anefa ny hamadika ho adina ambava ny taranja iombonana sady ahian’izy ireo rahateo ny mety tsy hisian’ny mpiadina hisafidy an’io taranja io noho izy tsy terena. Olana hafa ny tsy fahampian’ny mpampianatra manana traikefa amin’ny taranja EPS an-tsoratra. Mampahafantatra ny fananan’izy ireo vahaolana mba hisorohana an’izany tsy fisian’ny mpiadina noho ny fampiharana ny adina antsoratra izany ire o mpampianatra.
“Misalasala kely ihany izahay mpampianatra taranja ara-panatanjahantena manoloana ny fanapahan-kevitry ny minisitera. Tsy manana mpampianatra manana traikefa sy fahafahana mahafehy an’izany isika. Efa tena ela ihany koa no tsy nisian’ny adina am-bava tamin’ny EPS, ka ho sarotra amin’ny ankizy ny hiverina hianatra lesona hafa indray, ankoatra an’ireo tsy maintsy hofeheziny any amin’ny taranja hafa. Ireo antony ireo no haminavinanay ny mety tsy hisian’ny mpiadina EPS amin’ny Bepc satria tsy an-tery io taranja io ”, hoy solontenan’ireo mpampianatra ara-panatanjahantena.
Miantso fihaonana amin’ny tompon’andraikitra ao amin’ny minisitera izy ireo mba hiarahana mijery akaiky an’izao toe-javatra lalovan’ny adina ara-panatanjahantena noho ny hamehana ara-pahasalamana izao. Milaza ho manana ny vahaolana azo ampiharina hahafahana manatanteraka ny adina ankoatra ny am-bava mantsy ry zareo.
Fampanaraham-penitra lalam-baovao Hoesorina ireo tsena kely mitady hiorina eny amin’ny “Rocade Est”
Fetim-pirenena Handray ny Matso lehibe ny kianjan’i Mahamasina
Fiarovana amin’n y covid-19 – Hotaperina amin’ity volana ity ireo fatram-baksiny an’hetsiny
Disadisana finoana Saro-bahana ny olan’ny Jesosy Mamonjy Ankorondrano
Fandaharanasa fihariana :: Hanohana orinasa madinika telonjato ny Banky Afrikana
Fanakatonana CTC-19 :: Tafafindra toerana ireo marary folo teny Soamandrakizay